Ikhareji kaloliwe endulini
Itreyini sinombuki zindwendwe onguMeg
Yiza undwendwele inqwelo yethu entle, ebuyiselweyo, phezulu kwinduli enoxolo, engekho-grid.
Abahambi okanye abahamba ngebhayisikile, iikhefu zothando okanye ukurhoxa kwindalo; oku kukulungele ukuzonwabisa okanye ukuphumla ngokulula kwidesika ngekomityi yeti efudunyezwe ngamandla ombane.
Ipholile unyaka wonke kunye nesitovu samaplanga esibaswayo kunye nekhitshi, inayo yonke into oyifunayo ukuze uhlale uphumle.
I-massage egcweleyo iyafumaneka kwindlu yasefama kolo phawu longeziweyo lobunewunewu kunye nokuphumla, ukuba uxolo, ukuzola kunye nengoma yeentaka akwanelanga!
Ukumka kuyo yonke into kulula kunokuba unokucinga, kule khareji incinci imangalisayo ihleli kwinduli engasese.
Sisithuba esikhethekileyo ngeendlela ezininzi, kodwa ndingachaza ezinye zezinto esizithandayo!
Ikhareji ikumhlaba wendawo encinci esebenzayo kunye noluntu. Indlu yasefama inabantu abaninzi abahlala kunye nokwabelana ngegadi, kwaye singaphandle kwegrid ngokupheleleyo, kunye nonikezelo lwethu lwamanzi amatsha, kunye nenkqubo encinci ye-hydro ezimeleyo enenkxaso yelanga ukubonelela ngawo wonke umbane wethu.
Inqwelwana ngokwayo yenziwe ngenqwelo yoonogada. Ngaphambi kokuba kwenziwe iziqhoboshi ekude nenjini, umlindi wayehamba ngale nqwelo, yaye kwakuza kufuneka azibhulele ngesandla zonke iikhareji xa kuyimfuneko. Xa ubugcisa buhambela phambili, ezi nqwelo zathengiswa kumafama ngomzila kaloliwe, kunye neeshedi neekhabhini ezakhiwe kakuhle.
Le yona yoyiswa yaya kutsho encotsheni yenduli yethu yaza yalungiswa, kwaye sichulumancile kakhulu ukuba sabelane ngayo!
Ilungele ukuhlehla, ikhefu lothando, okanye isiseko sohambo lokuhamba okanye lokuhamba ngebhayisekile, inqwelo ikufutshane ngokwaneleyo kwimpucuko ukuba ibe lula (idolophu yentengiso yaseMachynlleth yimizuzu eli-15 yokuqhuba) kodwa ikwakude ngokwaneleyo ukuba uphumle ngokwenene. .
Ndinalo negumbi lonyango endlini, ke ukuba ungathanda ukubhukisha kwi-Holistic Massage njengenxalenye yeholide yakho, ndixelele kwaye ndingavuya kakhulu ukukubona.
Indlu yasefama enomhlaba apho inqwelo ikuwo, yindawo yokuhlala kuphela kweli cala lentaba, ke ukuba uxolo yinto oyifunayo ke ufikile kwindawo elungileyo.
Nangona kunjalo impucuko isondele!
Idolophu yentengiso enomtsalane yaseMachynlleth kukuhamba ngemizuzu eli-15, kwaye inoluntu oludlamkileyo kunye neevenkile ezaneleyo zokukufumana yonke into oyifunayo.
Zininzi izinto ezinomtsalane ezithandwayo, umzekelo, iZiko leTekhnoloji yoBunye kwabo banomdla wokunyathela kancinci, ipaki yebhayisekile yeDyfi yabantu abathanda ukuhla isecaleni komnyango, okanye iProjekthi yeDyfi Osprey, indawo yokufuya ii-osprey.
Sibekwe kumda osemazantsi wePaki yeSizwe ye-Snowdonia, ke kukho okuninzi okuphononongwa ngabahambi kunye nabakhweli beebhayisikile ukuba benze- iCadair Idris yenye yeentaba zam endizithandayo kwaye yimizuzu nje eli-15 ukusuka...
Sikumgama oziikhilomitha ezi-1.5 ukusuka ku-A487 kufutshane ne-Machynlleth, sinyuka kwindlela yamahlathi- egcinwe kakuhle kodwa enemingxuma egqobhozayo, kumqhubi werali kuthi sonke.
Izalathiso ezipheleleyo nezilula ziya kuthunyelwa xa ubhukisha!
Kukho indawo yokupaka, kunye nohambo olufutshane (umzuzu om-1) kwinduli ethe tyaba enezinyuko, ke nceda uqwalasele ukuba ungakulawula oku ngaphambi kokuba ubhukishe!
Ndihlale apha ngaphandle kwemoto iminyaka eyi-10, kwaye ngokuqinisekileyo ndiyakwazi ukulawula.
Oololiwe beza rhoqo eMachynlleth besuka kwicala laseShrewsbury / Birmingham, kwaye ukusuka eMachynlleth kukho inkonzo yebhasi elungileyo eza ePantperthog. Luhambo lwemizuzu engama-25 (kwakhona, unyuke!) ukuya kwikhareji ukusuka kwisikhululo sebhasi.
Ewe kusoloko kukho iteksi- esuka eMachynlleth ixabisa i-£10. Ndinganika iinkcukacha zabo xa bebhukisha.
Sihlala ngaphandle kwegridi!
Sicinga ukuba oku kumangalisa kakhulu, kwaye ukuthanda ukuzimela ngamandla kunye namanzi.
Kodwa ithetha ukuba ngamanye amaxesha, xa komile kangangexesha elide, okanye xa izinto zingahambi kakuhle, kusenokufuneka silumkele ubungakanani bamandla esiwasebenzisayo.
Ngamanye amaxesha kuthetha ukuba uxolo luya kophulwa ziiyure ezimbalwa zejenereyitha yethu endala enengxolo yedizili itshaja iibhetri ukuba bekukho ingxaki ethile, okanye sisebenzise isarha yesarha okwexeshana ukugawula iinkuni zethu (kunye nezakho!).
Oku kuthetha ukuba ngamanye amaxesha kuya kufuneka sikucele ukuba usebenzise irhasi endaweni yeketile yombane, kwaye uphephe ukusebenzisa izomisi zinwele okanye izinto zodidi oluphezulu ezifanayo.
Ngaphandle kwezi ziganeko zinqabileyo akufanelekanga ukuba zenze naluphi na ukuphazamiseka, imvakalelo nje efudumeleyo efudumeleyo yokuba ngexesha lokuhlala kwakho awunayo nayiphi na impembelelo kwindawo yakho, kunye nomzekelo omhle wendlela yokuphila kwe-eco inokusebenza!
Izihlangu ezilungileyo zangaphandle okanye ii-wellies, kunye neslippers zikwangumbono olungileyo njengoko ndibonelela kodwa eyakho inokukhethwa.
4.95 out of 5 stars from 514 reviews
4.95 · Izimvo eziyi-514
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi514
Zininzi izinto ezinomtsalane ezithandwayo, umzekelo, iZiko leTekhnoloji yoBunye kwabo banomdla wokunyathela kancinci, iDyfi Bike Park yabathanda ukuhla kakhulu ngabamelwane bethu abasondeleyo, okanye iProjekthi yeDyfi Osprey, indawo yokufuya ipere ye-osprey.
Sibekwe kumda osemazantsi wePaki yeSizwe ye-Snowdonia, ke kukho okuninzi okuphononongwa ngabahambi nabakhweli beebhayisikile ukuba benze- iCadair Idris yenye yeentaba zam endizithandayo kwaye kukumgama wemizuzu engama-20 kuphela..!
Ndizama ukuba lapha ukuze ndamkele iindwendwe (ngaphandle, kumgama), kodwa kwimeko apho ndixakeke ngokuba ngumama, ndiza kukushiyela izalathiso ezineenkcukacha kwaye ndiya kuqhagamshelwana naye ngomnxeba.
Phantse kuya kuhlala kukho umntu okhoyo wokuphendula imibuzo okanye akuncede ngexesha lokuhlala kwakho, nangona iya kuba kukhetho lwakho ngokupheleleyo ukuba unxibelelana nathi okanye hayi- ukuba ungathanda ukuba nesakho indawo ke yile nto kanye oya kuyenza. fumana.
Xa siphuma sonke, ndiza kufumaneka ngefowuni.
Ndizama ukuba lapha ukuze ndamkele iindwendwe (ngaphandle, kumgama), kodwa kwimeko apho ndixakeke ngokuba ngumama, ndiza kukushiyela izalathiso ezineenkcukacha kwaye ndiya kuqhagam…